Tag: kunatsiridza data | Martech Zone
Tag: dudziro yedata
Muvhuro, April 26, 2021 Muvhuro, April 26, 2021 Zara Ziad
Duplicate dhata haina chete kudzikisira iko kwechokwadi kweyebhizinesi nzwisiso, asi zvinokanganisa hunhu hwako hwevatengi ruzivo zvakare. Kunyangwe mhedzisiro yedhipatimendi yedatha yakatarisana nemunhu wese - IT mamaneja, vashandisi vebhizinesi, vanoongorora data - ine kukanganisa kwakanyanya pane kushambadzira kwekambani. Sevashambadziri vanomiririra chigadzirwa chekambani nezvipiriso zvebasa muindasitiri, data rakashata rinogona kukurumidza kusvibisa zita rako rechiratidzo uye rinotungamira mukuendesa yakaipa mutengi.
Dhata Hutsanana: Yekukurumidza Gwara Kune Dhata Unganidza Kuchenesa
NeChishanu, Kurume 12, 2021 NeChishanu, Kurume 12, 2021 Javeria Gauhar
Kubatanidza purge ibasa rinokosha rekuita bhizinesi sekushambadzira kwakananga tsamba uye kuwana sosi imwe yechokwadi. Nekudaro, mazhinji masangano achiri kutenda kuti iyo yekubatanidza kuchenesa maitiro inongogumira kune matekinoroji eExcel uye mabasa anoita zvishoma kwazvo kugadzirisa zvinodikanwa zvinowedzera zvakaoma zvemhando yedata Iri gwaro richabatsira bhizinesi uye vashandisi veIT vanzwisise kubatanidza purge maitiro, uye pamwe nekuvaita kuti vazive kuti nei zvikwata zvavo zvisingakwanise